Posted by သင့်ကင်း at 5:19 AM 1 comments
အဖမ်းခံရသူတွေလည်း အဖမ်းခံရတယ်.. ပြည်ပထွက်ပြေးသူပြေး ပြည်တွင်းမှာပဲ လည်နေသူတွေလည်း လည်နေကြတယ်.. သေသူတွေလည်း သေကြပြီ.. အဲ.. ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်နေမှန်း မသိလို့ငိုကြနေကြရတဲ့ မိဘတွေလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပဲ.. ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ကို ပူဇေမိ လိုက်ရင်ပဲ သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရမည့်ကိန်း ဖြစိသွားတယ်.. အဲ ထူးခြားတာကတော့ လင်တော်မောင်တွေ ရှေ့ တန်းသွားရင် ဘုရားခန်းသွားပြီး နေ့ စဉ်ဘုရားဝတ်ပြုကြရတဲ့ တပ်မိသားစုကြီးကတော့ ယနေ့ဦးသန်းရွှေ ပုံကိုများ ၀တ်ပြုနေကြရမလား တော့ မပြောတတ်ဘူး.. အမိန့် ပေးရင် ပစ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ငါ့မိသားစု စီးပွားရေးကို ထိရင် ဗုဒ္ဓကိုလည်း အလွှတ်မပေးတဲ့ဦးသန်းရွှေ နဲ့ တော့ လိုက်ဖက်ညီနေသလားပဲ.. ၁၀ တန်းအောင်လို့ဒီအက်အေ လျှောက် ပညာတတ်လွန်လွန်းလို့ဆိုတဲ့ သူတွေကလည်း လေသံတောင် မဟရဲတဲ့ အခြေအနေမှာ ကြေညာချက် မျိုးစုံတွေလည်းကလည်းထွက်ဆိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမည့် နိုင်ငံရေးလို့ ပဲ သုံးသပ်သူတွေကလည်းရှိသေးတယ်.. ၁၉၃၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့ ကို ဒေ၀ဒဏ် ပြန်လည်မွေးဖွားတဲ့ နေ့ လို့သတ်မှတ်ကြရအောင်.. ဦးသန်းရွှေ ကလည်း လူ့ လောကရောက်လာခဲ့တာကိုး.. ဗေဒင် တွက်ချက်တတ်သူများ တွက်ကြည့်ကြပါအုံး.. ဒီဒေ၀ဒတ်ကတော့ သေနတ်ကိုင်တယ်ဆိုတော့ ထူးခြားတာတော့ အမှန်ပဲ။၁၉၆၀။ ၆၂။ ၇၂။ ၇၈။ ၈၃။ ၈၅။ ၈၆။ ၉၂ အဆင့်ဆင့် ရာထူးနဲ့တတ်လာပြီး တိုင်းပြည်လည်း မြောင်းထဲရောက်ခဲ့ရတော့တာပါပဲ.. ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ထဲက အဆိုကို ပြန်ကောက်ကြည့်ရအောင်..
၁။ နိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေကို မိမိသဘောနဲ့မိမိပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းနိုင်ခြင်း
၂။ မိမိသဘောနှင့်မိမိ စစ်ကြေညာနိုင်ခြင်း
၃။ အစိုးရနေရာများနှင့် အရပ်ဖက်နေရာများသို့မိမိသဘောတခုဖြင့် ခန့် အပ်အစားထိုးဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း
၅။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအား ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ထိန်းချုပ်ထားခြင်း
၆။ မိမိပါတီ(သို့ ) မိမိအဖွဲ့ အစည်း မှအပ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းကိုမျှ အင်အားချိန်ခွင်ရှာညှိခွင့် မပေးခြင်း
စသည်ဖြင့် ဆိုပါတော့ဗျာ.. ကျန်တဲ့အချက်တွေလည်း မေ့နေပါပြီ..လုံလဲလုံလောက်ပြီ ဆိုပါတော့.. အာဏာရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ ရှင်းတမ်းတခုလိုက်လာပါတယ်..
အာဏာရှင်အုပ်စုရှိလျှင် ဖိနှိပ်ခံသည် ပဋိပက္ခ တွင်းအလိုလိုကျရောက်လာရသည်။
၁။ အာဏာရှင်သည် အပြုအမူဖြင့် ဖိနှိပ်သည်။
၂။ အာဏာရှင်သည် အမြင်သဘောထားအရ ဖိနှိပ်မည်။
၃။ မိမိကိုယ်ကို ဖိနှိပ်ခံ၏ ယှဉ်ပြိုင်ဖက် အဖြစ် အလိုလိုမြင်လာမည်။
၄။ ထို့ အတွက် ကာကွယ်မှုအရ ခြေတလှမ်းနောက် နောက်ဆုတ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားမည်။
၅။ နောက်ဆုတ်မှုများလာသည်နှင့် အမျှ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဝေးသည်ထက်ဝေးလာမည်။
၆။ ထို့ ကြောင့်ပင် ပဋိပက္ခ များဖြစ်လာမည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီဆိုတော့ နောက်တမျိုးထက် ထပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်သူဟု ယူဆရသူကို မူဝါဒမခွဲခြားထိုးနှက်ခြင်း ဖြစ်လာပါတယ်
၁။ အာဏာရှင်တွင် စစ်ရေးနိုင်ငံရေး ခွဲခြားမှုမရှိခြင်း
၂။ နိုင်ငံရေးအား စစ်ရေးသုံးခြင်း
၃။ စစ်ရေးတွင်း နိုင်ငံရေးရောပြွန်းခြင်း
၄။ ကာကွယ်ရေး ယနယားကို အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံရေး မညီမျှမှုပေါ်၌ အစားထိုးလိုက်ခြင်း ဖြစ်လာပါတယ်။
ထိုအခါနိုင်ငံရေး၏ ထိပ်ဆုံးပိုင်း မညီမျှမှုသည် အင်အားသုံးဖြေရှင်းလာကြသည်.. ဒါက အခြေခံလေးပါ.. ထူးခြားလှတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. အဲဒီမှာ အာဏာရှင်ကိုယ်တိုင်က နောက်ဆုတ်ရင်းဆုတ်ရင်း ပဋိပက္ခတွင်းထဲ တတိုင်းပြည်လုံးကို ခေါ်သွင်းခဲ့တာပါ.. ဦးသန်းရွှေလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပဋိပက္ခတွင်း ခေါ်သွင်းခဲ့ပြီးပြီ.. ပဋိပက္ခတွင်းထဲရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ တတွေမှာ ရွေးစရာလမ်း နှစ်ခုပဲ အညံခံမလား တိုက်မလား နှစ်ခုပဲရှိတယ်.. အညံမခံလို့တိုက်နေကြပြီ ဆိုတာလည်း သတ်သေပြစရာမလိုတော့ဘူး.. ဒါဖြင့် ဘာလမ်းကြောင်းနဲ့တိုက်မလဲ.. နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းလား.. လုပ်ကြပါ.. အင်အားချိန်ခွင်လျှာ ညှိနိုင်အောင်လုပ်ကြပါ.. နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ ဆိုတာ ဦးသန်းရွှေ ဆွေးနွေးရဲမလား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မဆွေးနွေးရဲပါဘူး.. ဆွေးနွေးခဲ့သည်ထားဦး ဘယ်လိုအပေးအယူလုပ်ကြမလဲ လုပ်နိုင်ရင်တော့ လုပ်ကြပါ.. အင်အားချိန်ခွင်ရှာမညှိနိုင်ပဲ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ.. အောင်မြင်သည်ထားဦး.. လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လား.. ခုံရုံးလား.. ဖယ်ရှားသန့် စင်ခြင်းလား.. ရလဒ်သုံးခုထက်မပိုဘူး.. ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဦးသန်းရွှေလည်း လာဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်ဘူး.. လူ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ နဲ့ ကြည့်ရင် သူ့ အသက်အရွယ်ဟာ သူငယ်ပြန်မယ်ဆိုရင် ပြန်နိုင်ပါပြီ.. မတရားတဲ့ အမိန့် အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရဖီဆန်ကြတဲ့ အန်အယ်ဒီရဲ့ဆောင်ပုဒ်.. ဒါဖြင့် တပ်မတော်ရဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်ထားပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဖြစ်ခွင့်မပေးတဲ့ သူနဲ့ဘာလို့ ဆွေးနွေးကြမလဲ.. ဆွေးနွေးတော့ကော ယုံကြည်ရပါ့မလား.. သူကဖောက်ပါပြီတဲ့ ဘာလုပ်ကြမလဲ.. အင်အားချိန်ခွင်ရှာ မညှိနိုင်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. အင်အားချိန်ခွင်ရှာညှိဖို့ ဆိုရင် နိုင်ငံရေး စစ်ရေး အနု အကြမ်း ခွဲနေလို့ ရတာ မဟုတ်ဘူး.. နုချင်လည်း နုမရတဲ့ အခြေအနေမှာ နုလို့အလဟသတ် သေကြရတာလည်း များပါပြီ.. စဉ်းစဉ်းစားစားလည်း လုပ်ကြပါလို့နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ ခင်ဗျာ.. ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ရှုပ်သွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်.. ရေးချင်းတာက တော်လှန်ရေးအကြောင်းပါ.. ချော်ထွက်လာသွားလို့ ပါ.. နောက်မှ တော်လှန်ရေး အကြောင်းရေးတော့မယ်။
Posted by သင့်ကင်း at 8:45 AM0comments
အမိမြေရဲ့ငိုသံများ
ကျောင်းသားတဦးက ပြောလာတယ်.. ပြီးမြောက်မှုမရှိရင် အလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့.. ဒါဖြင့် ဘာက အလုပ်ဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့အချက်တွေရမှတဲ့.. ကဲ..ထားလိုက်ပါတော့.. သူ့ အတွေးနဲပဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်.. ဒီနေ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာအရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး ဆူပူနေကြပြီ.. ဖိအားတွေ များလာပြီ.. လှုပ်ရှားမှုတွေများလာပြီ.. ယူအန်မှာ ဆွေးနွေးမှုတွေ များလာပြီ.. ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်ကောင်းတာပေါ့.. ဒါဖြင့် ဘာအချိန်အတွက်ကောင်းသလဲ.. ဘယ်သူ့ အတွက်ကောင်းနေသလဲ.. အခုချိန်ထိတော့ ဘာမှ မထူးခြားတာတော့ သေချာပါတယ်.. နောက်လာတော့မယ် ဆိုတာ ခဏထားလိုက်ရအောင်.. ပြည်တွင်းမှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ကြတယ်.. အဖမ်းခံကြရတယ်.. သေကြရတယ်.. ပုန်းအောင်းနေကြရတယ်.. ရိုက်နှက်ခံနေရတယ်.. ဒီလိုအခြေအနေမှာ ပြည်ပ ဖိအားက ဒီလောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တဲ့ဖိအားရဖို့ပြည်တွင်းက ဘာဖြစ်ပေးရမှာလဲ.. ပြည်တွင်းက အသတ်ခံရမယ့် ဓာတ်ပုံတွေ လိုသေးလား.. အရိုက်အနှက်ခံရမယ့် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ လိုသေးလား.. အဖမ်းခံရတဲ့ မှတ်တမ်းတွေလိုသေးလား.. ဘာတွေလိုသေးလို့ လဲ ဘန်ကီမွန်းရယ်.. သတင်းတွေနားထောင်တယ်.. ငိုသံတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်.. မိဘတွေရဲ့ငိုသံတွေ.. သားသမီးတွေရဲ့ငိုသံတွေ.. ဇနီးသားမယား တွေရဲ့ငိုသံတွေ .. ငိုသံတွေနဲ့မိုးချုပ်နေကြရတယ်.. အခုချိန်ထိ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့လမ်းဖွင့်ပေးမှုအတိုင်း လိုက်ပါနေရတယ်.. ၈၈ နောက်ပိုင်းထဲက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးပါတောင်းဆိုတယ်.. အခုထိလည်းတောင်း ဆိုတယ်.. တောင်းဆိုလို့ သေသူတွေ.. အဖမ်းခံရသူတွေလည်း များပါပြီ... ဒီလောက်ထိလည်း ပေးဆပ်နေပါတယ်.. ဦးသန်းရွှေ စိတ်ထဲမှာ သမီးမင်္ဂလာဆောင်လောက် စိတ်မ၀င်စားတာတော့ သေချာပါတယ်.. ကျနော်တို့ တွေက ရင်းထားရတာပါ.. ဒါနဲ့ တောင် ဦးသန်းရွှေ စိတ်ကြိုက်လမ်းအတိုင်း လိုက်နေရတယ်.. ၈၈ မှာ ဘ၀တွေရင်းလိုက်ရတော့လည်း ရွေးကောက်ပွဲနောက်လိုက်ရပါတယ်.. ၁၉၉၀ မှာ ရင်းကြရတော့လည်း အမျိုးသားညီလာခံတဲ့.. လမ်းပြမြေပုံကလည်း လာပါသေးတယ်.. ဒါတွေ အားလုံး သူတို့ ချပေးတဲ့ လမ်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့ရတာပါ.. ကျေနပ်ကြရဲ့ လား.. လာပြန်င်္ပြီ ဆွေးနွေးမယ်တဲ့.. ဘယ်နှစ်နှစ်ဆွေးနွေးကြမှာလဲ.. အဆုံးကကော ဇာတ်သိမ်းနိုင်ကြမှာလား.. ဘယ်နှစ်ခုနှစ် မျိုးဆက်ရယ်လို့ပေါ်လာရအုံးမှာလဲ.. ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေ.. နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ.. ပြည်ပ ရဲ့အခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါတယ်.. ဒီမှာကော အနှစ်နှစ်တောင်းဆိုထားတာတွေ ဘာများရလာခဲ့လို့ လဲ.. ယူအန်က မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ရအောင်မကူညီနိုင်ရင်တောင် င်္ဒီအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်ဖ်ို့ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ငိုသံတချို့ တော့ ပျောက်တန်ကောင်းပါရဲ့ .. ပြည်တွင်းက လှုပ်မှ ယူအန်လှုပ်တယ်.. ယူအန်လှုပ်မှ ပြည်ပနိုင်ငံတွေ လှုပ်တယ်.. တကမ္ထာလုံးလှုပ်မှ တရုတ်က လှုပ်တယ်.. အဲတော့ ပြည်တွင်းက အဓိက ဖြစ်သွားပြန်ရော.. ကျနော်တို့ ကြိုမြင်နိုင်တာက ပြည်တွင်းက လှုရှားမှုတွေ ဖြစ်ကတဲက လှုပ်ရှားမှု ရပ်သွားတာနဲ့ကျနော်တို့ အရှူံးလို့ .. ဟုတ်နေတာပဲ လက်ရှိအခြေအနေအရ ရှူံးတာပဲ.. နောက်ဆိုတာက နောက်ပေါ့လေ.. အဖမ်းခံရသူဆိုတာ မြင်ရတာ မဟုတ်တော့ သူ့ ရဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်း မသိနိုင်ဘူး.. တွေးကြည့်ရင် ကြောက်စရာကြီးပါ.. ဒီတော့ ကျနော့်သဘောကတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့မဆွေးနွေးကြပါနဲ့ .. နောက်တယောက်ပြောင်းရင် ပြောင်းကြပါ.. သူဆွေးနွေးချင်ရင် အကျဉ်းသားအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးမှ ဆွေးနွေးကြပါ.. သပိတ်တွေ မှောက်ကြပါ.. တနိုင်ငံလုံးမှောက်နိုင်တဲ့အခါ အောင်မြင်မှာပါ.. ခေါင်းဆောင်လုပ်သူတွေက ကေဒါတွေ ဖော်ထုတ်ကြပါ.. ကေဒါတယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းအားဟာ အလုပ်သမား ၃၀၀၀ကျော်ကို အပါခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတွေ သမိုင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်.. တိုင်းရင်းသားများလည်း ဗမာ့စစ်တပ်နဲ့ ဗမာတွေ ချနေကြပြီဆိုတဲ့ အတွေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖျောက်ဖို့ သင့်ပါတယ်.. အနုနည်းတွေ အကြမ်းနည်းတွေ ရွေးနေရလောက်အောင် ကျနော်တို့ မှာ ဒီလောက်အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး.. အဆင်ပြေနိုင်မှုကိုပဲ ဦးစားပေးကြပါလို့ .. မာရှယ်
Posted by သင့်ကင်း at 4:25 AM2comments
Posted by သင့်ကင်း at 2:27 AM 1 comments
သတိထားမှု လေ့ကျင့်ခန်း ၃ (သို့ ) ကွန်ယက်အား ချိုးဖျက်ခြင်း ၃
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ ယူဂျီ နဲ့ ပက်သက်လို့ နည်းနည်းဖတ်လိုက်ရတယ်... အဲဒီ အထဲက တချက်ကို ဖတ်လိုက်တော့ တော်တော်လန့် သွားတယ်.. သူရေးထားတာက သာမန်အားဖြင့်တော့ မှန်ပါတယ်.. ယူဂျီတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာ လှုပ်ရှားကြတဲ့ အခါ..သတင်းပေးတွေလို့ ယူဆရသူတွေကို ချဉ်းကပ်ပြီး သူတို့ ဆီကနေ သတင်းပြန်ယူဖို့ ပါ.. ဒီလိုလုပ်ရာမှာ ငွေအားဖြင့် အကုန်အကျကိုလည်း ခံနိုင်ရမည်တဲ့.. ရေးထားပါသေးတယ်..တန်ပြန်ထောက်လှန်းတာပါတဲ့... ဒီနေရာမှာ သေချာတာတခုက ရေးသူဟာ နအဖ ထောက်လှမ်းရေး အကြောင်းနားမလည်ပဲ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တခုခုကနေ ကိုးကားထားတယ်လို့ ပဲ ယူဆမိတယ်... အမြင်တခုအရ ဒီလူတွေကို စည်းရုံးပြီး သူတို့ ဆီက သတင်းယူမယ်..ဟုတ်တော့ ဟုတ်သလိုနဲ့အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်... ဒါကြောင့်များ ယူဂျီလောက အားနည်းသွားလေသလားလို့တွေးမိပါတယ်... မိမိတို့အနေဖြင့် ထောက်လှမ်းမှုတခုပြုကြရာတွင် ကွန်ယက် သည်အရေးကြီးလာပါသည်... စစ်အာဏာပိုင်များ၏ ကွန်ယက်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါက အကြမ်းအားဖြင့် ၀န်းရံ ဟူသော သဘောဆောင်ပါသည်... ခေါနေသောမြွေကို တကောင်လုံးစာ တခုခုဖြင့် အုပ်ဖမ်းလိုက်လျင်မိပါသည်.. ခေါင်းတုတ်နဲ့ ထိုး..အမှီးတုတ်နဲ့ ထိုး ဆိုရင်တော့ ပြန်လည်ရန်မူရန် အသင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်.. ထို့ အတူ ကွန်ယက် တခုကို ကွန်ယက်ဖြင့် သာပြန်လည်အုပ်ဖမ်းသင့်ပါသည်.. ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ ကွန်ယက်ကို ဘယ်နေရာက တိုးရင်လွယ်မလဲဆိုပြီး သွားတိုးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်သည် ကွန်ယက်၏ ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ခံရပေမည်... ကွန်ယက် ဟု ဆိုရာတွင် အမျိုးအစားအားဖြင့် ထောက်လှမ်းရေးပိုက်ကွန် ဖြစ်ပါသည်..ထို့ ကြောင့် မိမိလာအတိုးကို စောင့်နေမည်ဖြစ်ပါသည်... သို့ ကြောင့်ပင် မိမိတို့ သည် ယူဂျီများ အဖြစ် အများနှင့် လှုပ်ရှားကြပြီး တဘက် သတင်းပေးဟု ယူဆရသူအား စည်းရုံးကြပြီဆိုပါစို့ ..တနည်းအားဖြင့် သူ့ ထံမှ သတင်းပြန်ရှာကြပြီ ဆိုပါစို့ .. မိမိတို့ သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ဖန်တီးကာ သူနှင့် ထိဆက်မှုပြုကြပေမည်... ထိုအခါ သင်၏ စည်းရုံးမှု ကောင်းခြင်းကြောင့် သူသည် သင်ဘက်ကဖြစ်သွားပေမည်.. သင့်အား သတင်းပေးပေလိမ့်မည်...သို့ သော် မကြာမှီ သင်တို့ ယူဂျီတဖွဲ့ လုံး အနှိမ်နင်း ခံရတော့မည် ဖြစ်သည်... အဘယ်ကြောင့်နည်း... ပိုက်ကွန်ဟူသည် တခုနှင့် တခု ထိဆက်နေအောင် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်... သင်တို့စည်းရုံးလိုသော သူတို့ သည် ထောက်လှမ်းရေးမှ မွေးထုတ်ထားသောသူများဖြစ်သည်... ဒါနှင့် ပက်သက်ပြီး နောက်များမှ သေချာအောင်ပြောပါမည်.. အဓိကတော့ သူတို့လက်သပ်မွေးထားသူများဖြစ်သည်..သို့ သော် ထောက်လှမ်းရေး တို့ သည် မည်သည့်အရာကိုမျှ ယုံစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ...နည်းစနစ်ကိုသာလျှင် ကျင့်သုံးပေလိမ့်မည်..ထို့ အတွက် နည်းစနစ်အရ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းခြင်းကို ကျင့်သုံးကြပေမည်.. တန်ပြန်ထောက်လှမ်းခြင်းအရ..တနည်း..ကွန်ယက် သဘောအရ ထိုမွေးထုတ်ထားသူအချင်းချင်း ထောက်လှမ်းမှုပြုနေကြမည် ဖြစ်သည်..ထိုသို့ စောင့်ကြည့်ကြရာတွင် ရှေ့ ပိုစ့်များတွင် ပြောခဲ့သလို ဖြစ်စဉ် အမှတ်အသားများ အရ ရေးမှတ်ကြပေတော့မည်..ထိုအခါ ယူဂျီတို့ သည် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ချဉ်းကပ်၍ ထိုသတင်းပေးဟု ယူဆရသူဖြင့် ထိဆက်မိပါက..ထိုသတင်းပေးဟု ယူဆရသူနှင့် အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ..အဆင်မပြေသည်ဖြစ်စေ... ဆင့်ကဲ စောင့်ကြည့်နေသုတို့ ၏ ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းထဲတွင် သင်ပါသွားပြီ ဖြစ်သည်.. ထို့ အတွက် သင်တို့ သည် ထောက်လှမ်းရေးပိုက်ကွန်၌ ငြိသွားကြပြီ ဖြစ်သည်.. သို့ သော် သင်အား မည်သို့ မျှ အန္ဒရာယ်မပြုသေးပဲ.. သင်၏ ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း ရေးမည့်သူတဦး ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပေတော့မည်...ထို့ ကြောင့် သင်တို့ ၏ ယူဂျီသည်လည်း ကိုယ်မပျောက်နိုင်ကြတော့ပေ... ထို့ ကြောင့် မိမိတို့ သည် အမှန်တကယ် ချဥိးကပ်လိုပါလျင် အိပ်နေသောမြွေအား အုပ်ဖမ်းသကဲ့သို့ထိုပ်ိုက်ကွန်ကို ပိုက်ကွန်ဖြင့် ထပ်အုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်ရပေလိမ့်မည်... ထို့ ကြောင့် ဖြစ်စဉ် ရေးသားခြင်း အကျင့်သည် အရေးပါကြောင်း ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်... မိမိချဉ်းကပ်မည့်သူအား သူ၏ ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းကို အချိန်ပေး၍ မှတ်သားထားခြင်းအားဖြင့် ထိုသူ၏ ဆက်နွယ်မှုများ ပေါ်လာပြီး.. အဆငိ့ဆင့် လိုက်လံ ထိန်းချုပ်လိုက်ပါက ထိုထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်သည် သင်၏ အကောင်းဆုံး သတင်းပေးသူများ ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်... သို့ သော်..ကွန်ယက်တခုကို စကိဝိုင်းတခုဟု မြင်ကြည့်ပါ... အပြင်က သူ့ ထက်ကြီးသည့် စက်ဝိုင်းဖြင့် အုပ်လိုက်ပါက ထိုကွန်ယက် ပိတ်မိသွားပေမည်... ထိုသို့ ပိတ်မိနေသော ကွန်ယက်သည် မသင်္ကာစရာတခု ဖြစ်လာပြီး ပြန်လည် ဒုက္ခပေးနိုင်ပေမည်..ထို့ ကြောင့် ထိုစက်ဝိုင်းတခုအား ဖွင့်ဟထားသော စက်ဝိုင်းဖြင့် အုပ်သင့်ပါသည်..ပုံအားဖြင့် ဂ ၁ ပ င ဆိုသော ပုံများဖြင့် စက်ဝိုင်းအား အုပ်နိုင်ပါမှ သူ၏ ပုံမှန် လည်ပတ်နေသဖြင့် သင်သည် အ၀င် အထွက်မှ သတင်းစောင့်နားထောင်ရုံသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်... ထို့ ကြောင့် တန်ပြန်ခြင်းသည် သူတပါး၏ ကွန်ယက်ကို အပေါ်က ထပ်အုပ်ထားလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်..ရင်ဆိုင်တိုးခြင်းမဟုတ်ပါ... စဥိးစားကြည့်သင့်တာက ထိုသို့ရန်သူ ၏ လက်ပါးစေများ အများအပြားပေါ်ထွက်နေပါသည်.. ထိုသည်မှာ ပိုက်ကွန်တခုဖြစ်ခဲ့ပါလျင် မိမိတို့ ဘက်မှ လာရောက်တိုးအောင် သတင်းပေးများဟု အသံလွင့်နေကြတာလားဆိုတာတော့ ကျနော်လည်း မသိပါဘူး.. ဟုတ်များဟုတ်လေမလားဟဲ့ ဟုစဉ်းစားရင်း........
Posted by သင့်ကင်း at 3:32 AM0comments
သတိထားမှု လေ့ကျင့်ခန်း ၂ (သို့ ) ကွန်ယက်အား ချိုးဖျက်ခြင်း ၂
ကျနော် တို့တွေဟာ မကျေနပ်ချက်ရှိလို့ဖြစ်စေ.. စိတ်ဝင်စာမှုရှိလို့ဖြစ်စေ သူတပါးကို စောင့်ကြည့်ကြတတ်ပါတယ်... ဒီလို လုပ်တာဟာ မှားပါတယ်... စစ်ပွဲတပွဲ (သို့ ) ဘောပွဲ တပွဲမှာ တဘက်ရဲ့အခြေအနေကောင်းမကောင်းကို မစဉ်းစားခင် ကိုယ့်ဘက်က ကောင်းအောင် ပိုင်နိုင်အောင် အရင် ပြုလုပ်ရပါတယ်... ဒီလို ပြုလုပ်ဖို့မိမိရဲ့အနီးဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်မှ စလေ့လာရပါတယ်.. ဥပမာဖြစ်စဉ်အားဖြင့်..တနေ့ မှာ ဗိုလ်မှူးက မိမိရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ပက်သက်ပြီး ၁၀ မိနစ် မှတ်စု ချက်ချင်းရေးခိုင်းပါတယ်... ရေးတဲ့ သူတွေကလည်း စဉ်းစားပြီးရေး.. ဟိုနားဒီနားသွားကြည့်ပြီး ရေးသားသူတွေရော အမျိုးမျိုးပါပဲ...အဲဒါကို တွေ့ တဲ့ ဗိုလ်မှူးက ချက်ချင်းအားလုံးကိုခေါ်ပြီး ငေါက်ပါတယ်.. ကျနော်တို့တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သွားပြီး အားသန်ပါတယ်... တကယ်တော့ မိမိကိုယ်ပေါ်မှာတင် မှတ်စုရေးရပါတယ်... ဆိုလိုရင်း သဘောပေါက်ပါ့မလား မသိဘူး.. ရူပ်နေရင် ပြောကြပါ... ကျနော်တို့ တွေ တနေ့ အင်္ကျီဝတ်လိုက် ဟိုဟာလေး စားလိုက် ဟိုသွားလိုက် ဒီသွားလိုက် ..နေ့ စဉ်ရက်ဆက် လုပ်လာတဲ့ အခါမှာ အမြဲလိုလို လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေလို ဖြစ်လာပါတယ်..တယောက်ယောက် သာ ကိုယ့်ကို လုပ်ကြံချင်ရင် မခက်တော့ဘူးပေါ့... မိမိသွားတဲ့ နေရာတွေမှာ လုပ်ကြံမယ်.. စားတတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေမှာ လုပ်ကြံမယ်... ထောက်လှမ်းရေး သင်တန်းတခုမှာ ဆိုရင် သောက်ရေအိုးထဲကို ဆားတွေခတ်ထားပါတယ်... သောက်နေကြဆိုတော့ လက်က အရမ်းမြန်ပါတယ်... ညာကခွက်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်က အဖုံးဖွင့်ပြီးသား...ဒီတော့ မိမိအတွက် မိမိကာကွယ်ဖို့ လိုလာပါတယ်... ဒီလို လိုလာတဲ့ အခါကျတော့ သူတပါးက မိမိကို စောင့်ကြည့်နေသကဲ့သို့မိမိကိုယ်မိမိ သတိထား စောင့်ကြည့်ရပါတယ်... ဒါကြောင့် မှတ်တမ်းရေးတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်... မှတ်တမ်း ရေးတာဟာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရေးတာပါ.. ဒီပညာရဲ့အခြေခံမှာ ရေးတာက ဖြစ်စဉ်ရေးတာပါ... ဖြစ်စဉ်ရေးအခါ မိမိလိုရာတခုထဲ မဟုတ်ပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ထူးခြားချက်ကို ဖြစ်စဉ်ရေးတာပါ... ရဲတွေ ဘာတွေ ကြုံတွေ့ ဘူးသူ ရှိရင် သိပါလိမ့်မယ်... အခင်းဖြစ်စဉ်ကို ရေးရင် မနက် အိပ်ယာထရာက စပြီး မဆိုင်တာတာတွေပါ အကုန်လုံး အချိန်ခန့်မှန်းခြေတွေနဲ့ရေးသားပါတယ်... ဒါဟာ ဖြစ်စဉ်ရေးတာပါ... ဒီအခါ မိမိလိုရာတင် မဟုတ်တော့ပဲ မိမိသတိမထားလိုက်မိတဲ့ အသေးအဖွားလေးတွေဟာ မိမိဖြစ်စဉ်ထဲ ၀င်လာပါတယ်... ဒီဟာနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကာကွယ်ရာမှာ သုံးတဲ့ ဗျူဟာတွေ ဖြစ်လာတာပါ... ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးများ လန့် သွားမလားပဲ... မလန့် ပါနဲ့ ... ပစ်ဖိုင်နယ် အကြောင်းတွေ မပြောသေးပါဘူး.. ဒီတော့ ကျနော်တို့ တွေဟာ မိမိကိုယ်ကို ဖြစ်စဉ်ရေး ကျင့်သင့်ပါတယ်...ဒီလိုရေးသားရာမှာ အင်္ကျီဘာဝတ်တယ်...ဆိုတာမျိုးက အစ အသေးစိတ်ရေးသား တတ်အောင်ကျင့်ပါ... ဒီလို ကျင့်ပြီး ၁ ပတ် အကြာမှာ ဒီဖြစ်စဉ်ကို မိမိရဲ့ရန်သူ သွားလာနေထိုင်ပုံ အဖြစ်ရူမြင်ကြည့်ပါ... အဲဒီ အခါ ဟာကွက်ဆိုတာတွေ တွေ့ လာပါမယ်...ဒီ အခါကျမှ တန်ပြန်မှု အပိုင်းတွေ ဆက်လေ့ ကျင့်ပါ... ဟာကွက်တွေ တွေ့ လာတာနဲ့အမျှ ဘယ်လို ထိုးနှက်ရင် ရနိုင်မလဲ ..ထိုးနှက်ရာမှာ သူသွားတဲ့နေရာတွေကို အချိန်နဲ့အတိအကျ ဘယ်နေရာမှာ ထိုးနှက်နိုင်မလဲ .. သူရဲ့အနီးကပ် ထိုးနှက်ရာမှာ ဘာလို လုပ်ကြံမလဲ ဆိုတာ တွေ တွေ့ လာရမှာပါ... ဒီလိုပဲ မိမိသာဆိုရင် ဘယ်လို ရှောင်တိမ်းမယ်... ဘယ်ကနေ ဘယ်ကို ပြေးရင် ဘယ်လမ်းခရီး ဘယ်လောက်အကွာအဝေး ရန်သူရှိနေနိုင်တဲ့ နေရာတွေ စတာတွေကို တွေ့ ရမှဖြစ်ပါတယ်...ဒီလို ရုတ်တရက် တန်ပြန်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ဆိုတာ အရင်ပိုစ့်မှာ ပြောခဲ့သလို နေရာဒေသ အချိန်ကာလ ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်ရပါမယ်...ငယ်ငယ်ကလို ကျက်မှတ်ရပါမယ်... ဒါမှ တန်ပြန်လှုပ်ရှားမှု အပိုင်းကို လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ဆုတ်ခွာခြင်း အပိုင်းတွေမှာ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...ကျနော် မွေးဖွားပြီးချိန်မှ ၁၆ နှစ်သားထိ အိမ်မှာ ပစ္စည်းကို ထားပြီးရင် ဘယ်နေရာထားမှန်းမသိတော့ဘူး..ရှာလို့ တွေ့ ရင်လည်း မိမိမထားခဲ့တဲ့နေရာမျိုးက ပြန်တွေ့ တယ်.. ဘယ်သူယူတယ်လို့ လည်း မပြောနိုင်တော့ဘူး... ထောက်လှမ်းရေးတယောက်ဟာ သူကပြောတဲ့ စကားထက် သူများပြောလာတဲ့ စကားကို ယူလေ့ ရှိပါတယ် ...ငယ်ငယ်က ကျနော်အိမ်က လှေကား အရှည်ကို ဘယ်နှစ်ထစ်ရှိမှန်း မသိခဲ့ဘူး...ထမင်းစား ပန်းကန် ဘယ်နှစ်ချပ်ရှိမှန်းမသိခဲ့ဘူး... ဖြစ်သင့်ပါတယ်...သတိဆိုတာ မထားတတ်ခဲ့လို့ ပါ... အရေးမပါလို့စိတ်မ၀င်စားခဲ့တာလည်း ပါတာပေါ့.. ၁ ခုတည်း အနေနဲ့အရေးမပါနိုင်ပေမယ့် စုပေါင်းလိုက်တဲ့ အခါ မြန်မာပြည်ကို ထင်တိုင်းကြဲခဲ့တဲ့ ယန္ဒယားတခုဖြစ်ခဲ့တာ သာဓကပါ... ဒါကြောင့် အနီးစပ်ဆုံး မိမိကိုယ်မိမိ ၁ ပတ်လောက်ပြန်လေ့လာကြည့်ကြပါအုံးလို့ပြောရင်း အပိုင်း ၂ ကို ဇာတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်...
Posted by သင့်ကင်း at 6:28 AM0comments
သတိထားမှု လေ့ကျင့်ခန်း ၁ (သို့ ) ကွန်ယက်အား ချိုးဖျက်ခြင်း ၁..
ရှေးဦးစွာ မိမိတို့ သည် မှတ်စု စာအုပ်တအုပ်နှင့် ဘောပင် အမြဲဆောင်ထားရပေမည်... မိမိတို့ ၏ အလုပ် သို့ သော်လည်းကောင်း... တနေရာရာသို့သွားခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း... လေ့ကျင့်ရန် တမင်သွးရောက် ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း သွားလာကြပါလိမ့်မည်..ထိုသို့ သွားလာရာတွင် အလွယ်ဆုံးနှင့် အခြေခံ အကျဆုံး လေ့ကျင့်မှုမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပေမည်.. ဤတွင် ဘစ်စကား (သို့ ) ရထားဖြင့် သွားလာကြပါသည်..ထိုလေ့ ကျင့်ခန်းနဲ့ပက်သက်၍ အပိုအလုပ်ဟု လည်းထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါသညိ..သို့ သော် ဒီလို အလေ့အကျင့် များများလုပ်မှ အလေ့အထ တခုဖြစ်လာပါမည်... ထို့ ကြောင့် လေ့ကျင့်ပုံစံအား ဖော်ပြလိုပါသည်... ခရီးစတင်သွားလာရာမှ စတင်ကာ ဘူတာ (သို့ ) မှတ်တိုင်များကို မလွတ်စေပဲ မှတ်သားရပါမည်.. ဘယ်အချိန် ဘယ်ခရီးသွားသွား မှတ်သားနေရပါမည်.. မှတ်ပြီးသားများကိုလည်း ဖြည်းဖြည်းကျက်မှတ်နေရပါမည်...ထိုနေရာတွငိ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတခု ပြောပြပါမည်...ထိုမှသာ ကျနော်၏ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မည်... တခါက ထောက်လှမ်းရေးများကို စတင်ခဲ့ပြီး လူတော်များ သီးသန့် ရွှေးနိုင်ရန် တပ်မတော် အတွင်းမှ တပ်ကြပ် ၂ရစ် တချို့ ကို ခေါ်စေပါသည်...ထို သူများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးအောင်မြင်သူ နည်းနည်းသာလျင် စစ်ထောက်သို့ ရောက်ရှိပါသည်... ထိုသို့ ဖြင့် ရောက်ရှိလာသော စစ်ထောက် ၅ ယောက်၏ ကြုံတွေ့ ရပုံလေးများဖြစ်ပါသည်... သူတို့စစ်ထောကိသို့ပြေငိးရွှေ့ လာသောနေ့ မှာပင် ဗိုလ်မှူးတဦးနဲ့ သွားရောက်တွေ့ ရပါသည်... နားပင်မနားရသေးပါ...ထိုဗိုလ်မှူးထံသို့ ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးသည် အလုပ်ရူပ်လျက်ရှိနေပြီး..ရှေ့ ခုံပေါ်တွငိ ပိုက်ဆံ ၁၀ ကျပ် ခုံပေါ်တင်ထားပါသည်..ဗိုလ်မှူးဆိုသူက ထိုပိုက်ဆံကို တယောက် ၂ ကျပ်စီယူရန်နှင့် ဂိတ်စ ဂိတ်ဆုံး ဘက်စကား သွားစီးကြရန် ပြောပါသည်...ထိုစဉ်က ဂိတ်စ ဂိတ်ဆုံး ၁ ကျပ်ပါ... အသွားအပြန်ဆိုတော့ တယောက် ၂ ကျပ်ပါ... ဒီတော့ အားလုံးကလည်း ရန်ကုန်သား တယောက်မှ မပါ... ဘက်စကားလည်း မစီးဘူး...တောသား မြို့ တတ်တာထက်ဆိုးပါတယ်.. တာဝန်ဆိုတာကြီးက အပိုပါလာလို့ ပါ.. ဒီလိုနဲ့မေးစမ်းသွားလာပြီး ကားဂိတ်တခုရောက်တော့ တယောက်တစီး စီ စိးကြပါတယ်... ကားတွေကလည်း ရှေ့ ဆင့်နောက်ဆင့် ဆိုသလို ထွက်ကြတာပါ... ဒီလိုနဲ့စီးကြရင်း မှတ်တိုင် အမည်တွေ စာရွက်မှာ မှတ်ကြတာပေါ့... တခါတလေ မကြားလိုက်ရလို့ဘေးနားကလူကို မေးရနဲ့မှတ်ကြပါတယ်..ဒီလိုနဲ့ပြန်လာကြပါတယ်... ဗိုလ်မှူးဆီကို သွားပြပါတယ်.. ဗိုလ်မှူးက မကြည့်ပါဘူး...ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်ပါတယ်...နောက်တခေါက် ပြန်သွားခိုင်းတယ်...ဒီလိုနဲ့အဲဒီနေ့ က ၃ ခေါက်ပြန်သွားရပါတယ်... ဒီနေရာမှာ စပြောပါ့မယ် ...ဘာကြောင့်ဆိုတာကို ...ထောက်လှမ်းရေးတဦး လုပ်မည့်သူတယောက်ဟာ သူများထက် အမြင်ပိုကျယ်ရပါမယ်... ဒီအတွက် မှတ်တိုင်တွေ မှတ်ခိုင်းလို့မှတ်တိုင်မှတ်ပြီး ပြန်လာတာ မဖြစ်ရပါဘူး... ဒီမှတ်တိုင်တွေကို မှတ်သားနေရင်း သမရိုးကျထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကို မှတ်သားရပါတယ်... မှတ်သားရာမှာ အင်ပေါ့တန့် ပီတီ လို့ သုံးတဲ့အချိန်နေရာ မှတ်သားဖို့အရေးကြီးပါတယ်... စထွက်ချိန် ပထမ မှတ်တိုင်ရောက်ချိန်..ရောက်သွားတဲ့ အခါမှာ ခန့် မှန်းခြေ ဘယ်လောက်ဆငိးတယ်..ဘယ်လောက်တတ်လာတယ်..ဘယ်မှတ်တိုငိက လူများတယ် ဆိုတာတွေပါ အဆငိ့ဆင့် တိုးမှတ်လာရပါတယ်...သမရိုးကျ ထူးခြားချက်များကို လည်းမှတ်ရပါတယ်.. ဘယ်နားမှာ လမ်းဆုံ ရှိနေတယ်.. ဘယ်နားမှာ ထင်ရှားတဲ့ နေရာတွှေရှိနေတယ် ဆိုတာတွေပါ မှတ်သားကြရပါတယ်...ဒီလို မှတ်သားလာပြီး ဗိုလ်မှူးဆီပြန်သွားတဲ့ အခါမှာ ထပ်ဖြဲ ဦးမလို့ ပါပဲ... ဒါပေမယ့် မိုးလဲ ချုပ်နေလို့မဖြဲတော့ပဲ ပြန်ပြင်ခိုင်းတာပဲ လုပ်ပါတယ်.. ဘာလဲ ဆိုတော့ ထောက်လှမ်းရေး တယောက်ကို သူ့ အထက်ကလူက မေးလိုက်တဲ့ အခါမှာ ကြိုသိနေဖို့ နဲ့တင်ပြရာတွင်တော့ လိုရင်းကိုပဲ တင်ဖို့..တင်ရာတွင်လည်း အစီ၇င်ခံစာ တခုပုံစံ ဖြစ်သည်ထိ ပြန်ရေးကျင့်ရပါတယ်... အချောရေးနိုင်အောင် ဖြဲစုတ်ခံရတဲ့ စာ ၁၀ ကြိမ်ထက်မနည်းပါဘူး... ဒီလို နဲ့ ၁ လ အကြာမှာ ၇န်ကုန်တမြို့ လုံးကို မသိတဲ့ နေရာမရှိလောက်အောင် တောသားများ မြို့ ကိုသိမ်းလိုက်သလို ရန်ကုန်မှာ မွေးပြီး ရန်ကုန်မှာ သေတဲ့ လူတွေထက် ပိုအမြင်ကျယ်သွားပါတယ်... ယနေ့ ထိ ကျနော်တို့သေသေချာချာ ရေရေရာရာ ကားလိုင်းတွေ ကို မသိပါဘူး... ကိုယ်စီးနေကြတောင် ဂိတ်စ ဂိတ်ဆုံးမစီးမိကြပါဘူး... ဘယ်ကားလိုင်းမှာ ဘာမှတ်တိုငိတွေ ရှိတယ်လို့ကျနော်တို့အပြည့်အစုံ မသိကြပါဘူး... ဒါကြောင့်လည်း စစ်ထောက်များ ကွန်ယက်ဖြန့် တော့ ကျနော်တို့ မှာ စစ်ထောက်တွေ မကောင်းဘူး ပြောရုံကလွဲလို့ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး... သူများမကောင်းမှန်းသိရင် မကောင်းတဲ့သူထက် တော်အောင် မလုပ်ပဲ လေကုန်ခံခဲ့ကြလို့နှစ်တွေလည်း ကြာရှည်ခဲ့ပါတယ်.. ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတော်တော်များများမှာ အကျင့်တခု ရှိပါတယ်... ကျနော့်အထင်ပါ... အများနဲ့စကားတပြောပြောနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုရင် လာထားပဲ... ၁ ယောက်ထဲ လူမသိ သူမသိ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် သွားတာပဲ..ကျနော်က ဗုဒ္ဒဘာသာ ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓကို ချီးမွန်းထားတဲ့ အကြောင်းရာလေးပါ...ဆိတ်ကွယ်ရာ အ၇ပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို ပြုတော် မမူသော မြတ်စွာဘုရား..တဲ့ ...ကျနော်တို ကျတော့ လူရှေ့ မှာတော့ အင်း အင်း ပဲ..နောက်တော့လဲ ဘယ်သူမှ သိတာမဟုတ်ပါဘူး.. ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးတွေလည်း ဖျောက်ရပါမယ်..ထောက်လှမ်းရေးပညာထဲမှာ အဲဒါနဲ့ပက်သက်ပြီးလဲပါပါတယ်.. ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ ဘက်စကား စီးမှတ်တယ်ဆိုတာ ထောက်လှမ်းရေး ပညာသင်ဖို့ရှိသင့်တဲ့ အချက်တွေများစွာထဲကမှ သေးသေးလေး တချက်ပါ... ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင် အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် လေ့ကျင့်စေချင်တယ်... ဒါတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့တွေးထင်မိပါကြောင်း...
Posted by သင့်ကင်း at 6:46 AM 1 comments
Posted by သင့်ကင်း at 7:32 AM 1 comments
“ နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ ကျန်ုပ်တို့နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ
လူ့ လောကတွင် တွေ့ ကြုံနေကြရသော ကိစ္စပင်ဖြစ်ပေသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ လူ့ ကိစ္စဟု
ဆိုရပေမည်။ ကျန်ုပ်တို့စားမှု၊ သောက်မှု၊ နေမှု၊ ထိုင်မှု၊
သွားမှုလာမှု အစုစုသည် နိုင်ငံရေးပင်ဖြစ်၏။
ကျန်ုပ်တို့ သည် နိုင်ငံရေးကို မဆင်ခြင် မတွေးတောမိစေကာမူ
နိုင်ငံရေးသည် ကျန်ုပ်တို့ နှင့် အမြဲတစေဆက်သွယ်နေ၏ ”
၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ က အလယ်ပစ္စယံညီလာခံကြီးမှာ ပြောသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောငိဆန်း မိန့် ခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်... နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့သော်လည်း အမှန်တရားဟာ လက်ဆတ်နေမြဲပါ... အာဏာရှင်ကြီးဟာ ပြည်သူလူထုကို နိုင်ငံရေးနဲ့မပက်သက်စေရန် အမျိုးမျိုး ၀ါဒဖြန့်ပုဒ်မတွေထုတ်လေ့ရှိပါတယ်... သူတို့နိုင်ငံရေးကို ဘယ်လိုနားလည်ထားကြပါသလဲ... တကယ်တော့ သူတို့ဒီစကားလုံးကို ရမ်းသုံးနေတဲ့ အဆင့်ပဲရှိပါတယ်... ကျနော်တို့ ရဲ့တနေ့ တာလှုပ်ရှားနေမှုတွေဟာ နိုင်ငံရေးဆိုရင် ကျနော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ...ဒီလို အရေမရ အဖတ်မရ ..အာဏာရှင်ကောင်းစားမှုသာရတဲ့ ဒီလို ပုဒ်မတပ်တိုင်း နိုင်ငံရေးမလုပ်ကြရတော့ဘူးလား... ကျောင်းသားတွေကို အတင်းအဓမ္မ ဟို ကြံ့ လိုလို ဖွတ်လိုလို အဖွဲ့ ထဲအတင်းထိုးထည့်တာကျတော့ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာလား... ခေတ်အဆက်ဆက် မတရားဥပဒေကိုမုန်းတီးတာ ရှေ့ ဆုံးက ကျောင်းသားတွေပါ.. မတရားဥပဒေကို တော်လှန်ခဲ့တာ ရှေ့ ဆုံးက ကျောင်းသားတွေပါ... ပြည်သူ့ အတွက် အသေခံရဲခဲ့တာ ရှေ့ ဆုံးကကျောင်းသားတွေပါ... ယနေ့ ကျနော်တို့ လူငယ်များ ဒီလိုသတ္တိရှိကြပါရဲ့ လား... ၁၉၂၀ ပထမကျောင်းသားသပိတ်ကြီး မဖြစ်မှီကထဲက ၁၉၀၃ မှာ အဂ်လိပ်ဆရာတွေကို ရှိခိုးနှုတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီး ပညာဝန်မစ္စတာ စကော့ရဲ့အမိန့် ထုတ်ပြန်တာကို ကျောင်းသားများ ကန့် ကွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသေးတယ်...နေမ၀င်အင်ပါယာဆိုတဲ့ အဂ်လိပ်ကိုနော်... နောက် ၁၉၂၀ရောက်လာတော့ ကျောင်းသားများကန့် ကွက်နေတဲ့ကြားက မတရားတဲ့ ယူနီဗာစတိ အက်ဥပဒေကို ဒုတိယဘုရင်ခံ ကရက်ဒေါက်နဲ့ ပညာရေးမင်းကြီး ဆာမတ်ဟန်းတား တို့ ကထုတ်ပြန်ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်...ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေ အချက်တွေထဲက (၁၀)ချက်လောက်ဟာ ကျနော်တို့ ပညာရေးကို ကျွန်ပညာေ၇း အဖြစ်ပို့ ဆောင်ဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ... ကျနော်တို့အခြေအနေမှာကော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ... စာမတတ် ပေမတတ် အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေက ကျနော်တို့ ပညာရေးကို ၀ငိရောကိစွက်ဖက်ပြီး သူတောင်းစားပညာရေး ဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်လို့ ကော မထင်မိကြဘူးလား... ဒီလို.. မတရားတဲ့ ကျွန်ပညာရေးကို သပိတ်မှောက်ဖို့ကျောင်းသားကြီး (၁၁)ဦးဟာ ရွှေတိဂုံဘုရား စနေထောင့်ကို သွားရောက် သစ္စာအဓိဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်... အဲဒီနေ့ က ၁၉၂၀ ဒီဇင်ဘာ (၃)ရက်နော်....သစ္စာတွေဆိုခဲ့တာ (၁၁)ဦးထဲပါ... ကျနော်တို့ ကော ဘယ်သူ့ ကို စောင့်နေမှာလဲ...လူဘယ်လောက်များများ ဆန့် ကျင်ကြမှ ကိုယ်က ပါဝင်ရဲမှာလဲ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ပါအုံး... နောက်မှ ကျောင်းသားတွေ၇ဲ့ရဲရင့်တဲ့ ဒေါင်းစိတ်ဓါတ်နဲ့ပေါင်းစုလာပြီး ဒိဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ မှာ ၁၅ ဦး ထပ်မံ ဖြည့်စွတ်ပြီး (၂၆) ဦး ကောင်စီ ဖွဲ့ ကာ သပိတ်တိုက်ပွဲ စတင်ခဲ့ပါတယ်... ဒါကြောင့်လည်း ဆန့် ကျင်တဲ့ သပိတ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နေ့ ကို အမျိုးသားနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ... ယခင်က ကျောင်းသားကြီးများဟာ အရာရာကို လေ့လာနိုင်တယ်.. အသိပညာတွေ ရှိခဲ့ကြတယ်.. စိတ်ဓါတ်တွေ ကြံ့ ခိုင်ခဲ့ကြတယ်... ဒီတော့ ယနေ့ အာဏာရှင်များဟာ သူတို့ ရဲ့မတရားတဲ့ အာဏာများပြဌာန်းရာမှ အစပြုပြီး သူတို့ ၇ဲ့ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာကို ထိပါးလာမှာ ကြောက်လန့် ကြတာကြောင့် အနှစ်နှစ် လ လ ကျောင်းသားတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်.. နှိပ်စက်ခဲ့တယ်.. အကျဉ်းချခဲ့တယ်.. ဒါပေမယ့် ရုပ်ကိုသာ သတ်လို့ ရမယ် နှိပ်စက်လို့ ရမယ် ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေရဲ့အမျိ်ုးသားရေးစိတ်ဓါတ် ဒေါင်းစိတ်ဓါတ်တွေကို သတ်လို့ မရကြောင်း အာဏာရှင်တွေ ကောင်းကောင်းသိလာတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့အသိပညာ အတတ်ပညာတွေကို လုံးဝပိတ်စို့ ပြီး နကန်းတလုံးမှ မသိတဲ့ ကမ္ဘာ အဆင့် နောက်ဆုံးမှရေသော် (၁) ဖြစ်နေစေဖို့ရက်ရက်စက်စက်နဲ့လူကိုလည်းသတ်.. အဓိက အကျဆုံး စိတ်ကိုပါ သတ်နေပြီ ဆိုတာ ကျောင်းသားများ သိရှိကြပါစေ... ယနေ့ လူငယ်များဟာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် အပြည့်မထားနိုင်သေးသော်လည်း အပိတ်အပငိ အတားအဆီးမှ လွတ်မြောက်ဖို့အစဉ်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ဒီအွန်လိုင်း အသုံးပြုနေသူများက သက်သေခံပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက ကျောင်းသားဘယ်လောက်များများ အွန်လိုင်းအသုံးပြုနိုင်ကြမှာလဲ... ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဟာ အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ မတရားတာတွေကို လက်သင့်မခံပဲ တော်လှန်သပိတ်မှောက်ကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီ... ကျနော်တို့လူဘယ်လောက်များများ လိုမှာလဲ...ဖမ်းဆီးခံရမှာ ကြောက်နေပါသလား...တချို့ ကပြောကြတယ် ဆီနဲ့ ပဲ .. စား ပါရစေတဲ့..ဒါမျိုးတွေ စိတ်မ၀င်စားဘူးတဲ့... အဲဒီလို လူမျိုးကို မေးကြည့်ချင်ပါတယ်.. ဆီနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထမင်းစားနိုင်မှာလဲ.. နောက်ဆို ရေနဲ့ ပဲ ထမင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး မပြောမိပါစေနဲ့ .. အာဏာရှင် ဖမ်းဆီးခံရမှာ ကြောက်လို့ ပါတဲ့... အဖမ်းမခံနိုင်ပဲ တော်လှန်ကြရင်ရော တကယ်ပါဝင်ရဲ ကြပါသလား... အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ရှိကြပါသလား...မတရားတာကို ခေါင်းငုံ့ မခံတတ်တဲ့ ဒေါင်းစိတ်ဓါတ်တွေ ရှိကြပါရဲ့ လား... နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည်သူနဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့လမ်းမပေါ်က အလောင်းတွေကို မျက်စိထဲ မြင်ကြည့်လို့ ရပါရဲ့ လား... တံတားနီ ဆိုတာကနေ သမိုင်း ဖျောက်လို့တံတားဖြူဆိုတဲ့ ထုံးသုတ်ရုံနဲ့ဘယ်တော့မှ သမိုင်းဖျောက်ဖျက်လို့ မ၇တဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ မျက်စိထဲ မြင်ကြည့်မိပါရဲ့ လား ... ဒီလို စိတ်ဓါတ်တွေရှိပြီ မြင်ပြီ ဆို၇င် ကျနော်တို့စတင်တော်လှန်မယ်... တမိသားစုလုံး နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ ငွေ ထိုင်ဖြုန်းနေတဲ့ဗိုလ်သန်းရွှေတို့မိသားစုပိုင်တဲ့“ ဂျေဒိုးနတ် ” ဆိုင်မှာ လုံးဝမစားသုံးပဲ သပိတ်မှောက်မယ်... မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ဘယ်သူမှ မစား၇အောင်လည်း တိုက်တွန်းမယ်...ဘယ်လိုလဲ..ကြောက်နေရတုန်းပဲလား...အမျိုးသားစိတ်ဓါတ် အမြန်ပြန်လည်ရရှိပါစေ...။၊
Posted by သင့်ကင်း at 4:30 AM 1 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြို့ နယ်ရုံးမှာ မိန့် ခွန်းပြောတော့ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်း (၃)ယောက်နဲ့သွားကြုံတယ်... ကျနော်တို့ က ၁၀ တန်း ဖြေမယ့်ကျောင်းသားလေးတွေ.. ကျူရှင် ရောက်အောင်သွားပေမယ့် ကျူရှင်ပေါ်မတတ်ပဲ အောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အမြဲထိုင်နေတယ်.. ကျူရှင်လာမှာလား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လာမှာလား လို့ဆရာက ခဏခဏ ဆူခဲ့ရဖူးတယ်.. ဘယ်အမှတ်ရှိပါ့မလဲ... လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာပေါ့.. ဖြစ်ချင်တော့ အနားမှာ အန်အယ်ဒီရုံး ရှိတာ သတိမထားခဲ့မိဘူး..ကျူရှင်တတ်တာ နှစ်ဝက်ကျိုးနေပြီ... အဲဒီနေ့ က ကျူရှင်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်း လူတွေအုံနေပါတယ်ဆိုပြီး သွားကြည့်မိတာ..ငြိမ်းချမ်းရေး နတ်သမီးလေ...အမေစုပေါ့... ကျနော်တို့ ဘက် စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ပြီး ကျောင်းသားတွေ အကြောင်းပြောလိုက်တာ မျက်ရည်ပါဝဲခဲ့မိတယ်... အဲဒီနေ့ ကစပြီး ကျနော့်ဘ၀ တဆစ်ချိုးခဲ့တယ် ဆိုပါတော့... ပြောချင်တာကတော့ ဒီအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး... ပြောချင်တာက ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းများ ပြောပြောနေကြတဲ့..ပြောခဲ့ကြတဲ့... “ကျောင်းသားဆိုရင် စာပဲလုပ်ရမယ်” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပက်သက်လို့ ပါ... ကျနော်တို့ ဟာ အမြဲတမ်း လိုရင်းကို မတွေးခဲ့ကြဘူး... ကြားကပေါက်ဖွားလာတာတွေကို အဓိက ထားခဲ့မိတယ်... အဓိက နဲ့သာမည ဆိုသလို ပေါ့လေ... မူလတန်း..အလယ်တန်း..အထက်တန်း..တက္ကသိုလ်ပေါ့ဗျာ... ဒါဟာ ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းရမယ့်လမ်းပေါ့... နှစ်ပေါင်း ၁၃နှစ် ၁၄နှစ်လောက် အချိန်တွေ ပေးကြရတယ်...ငွေတွေ ပေးခဲ့ကြရတယ်... မိဘတွေလည်း ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ကြရတယ်... ဒီကြားထဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့် အတန်းကိုခင်တွယ်လို့တတန်းကို နှစ်နှစ်နေခဲ့ရသူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်... တနှစ်ကို ပညာသင်စရိတ် ဘယ်လောက်များပါလဲ...ခန့် မှန်းဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်... အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တောင်းခံငွေတွေဆိုတာလည်း တနှစ်လုံး နည်းမှမနည်းတာပဲ... အဲတော့..ဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျောင်းတတ်ခဲ့ပြီး ဘာလုပ်မှာလဲ... ဘာလုပ်ကြမှာလဲ... ဒီတော့ ကျနော်တို့ပြန်မေးရလိမ့်မယ်.. ဘာလုပ်ကြမယ်လို့မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသလဲ... ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုမှာပေါ့ လို့ပြန်ဖြေရင် သာမန် မေဂျာ သမားတွေ ဘယ်လို အသက်မွေးကြပါမလဲ... စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာလို အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင် ရောစပ်ပြီး ရေရောင်းစားကြရမှာလား... တခြားနည်းပညာ တက္ကသိုလ်များကြတော့ကော ဘာထူးသလဲ... နောက်ထပ် ငွေကြေး တတ်နိုင်မှ တတ်လို့ အဆင်ပြေကြမှာပါ... သူတို့ ပြီးတော့ကော... အနည်းစုပါ... အများစုအတွက်ကတော့ မလွယ်ပါဘူး... ခုနပြောခဲ့တဲ့ ဘာလုပ်ကြမယ်လို့စိတ်ကူးလဲ ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်... ဘွဲ့ ရတဲ့ လူ အရောင်းစာရေးတဲ့ဗျာ.. အင်္ဂလိပ်လိုလေးပါ တတ်ရအုံးမယ်.. ရုပ်ရည်လေး ပြေပြစ်ရအုံးမတဲ့... ဘာနိုင်ငံ မို့ လို့ လဲဗျာ... ဒီလို နိုင်ငံတွေမှာတောင် ရုပ်ရည်ကို ထည့်မပြောပါဘူး.. နောက်မှ သူမကြိုက်ရင် မခန့် နဲ့ ပေါ့... အခုတော့ အလုပ်လျှောက်ဖို့ကိုယ့်မျက်နှာကို လှမလှ သူများလိုက်မေးရမယ့်ကိန်းဆိုက်နေတယ်... လာမလျှောက်ရင်ပဲ ရုပ်စိုးသလိုလိုနဲ့ ... ပြောရင်းရူပ်ကုန်ပြီ... ကျောင်းပြီးရင် မိမိပညာနဲ့လုပ်စားရအောငိ ကျနော်တို့ ကို ဘာပညာတွေ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသလဲ... စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး... လိုရင်းက စည်းဘောင် အကန့် အသန့် ထဲကမှ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ပညာလောက်ကို သင်ခဲ့ကြရတာပါ... ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ပညာရေးနဲ့ကျောင်းရဲ့ ပြင်ပလောက ရောက်လာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုအသုံးတဲ့တော့မလဲ...ကျိန်းသေတာကတော့ ၁၄နှစ်သင်ကြားရတဲ့ပညာရေးဟာ အရောင်းစာရေး..အထွေထွေအလုပ်သမား.. လုပ်ကြရမယ်ဆိုတာပဲ... ဒါဟာ နှစိပေါင်းများစွာ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုးကြားတဲ့ ဒေါင်းမျိုးနွယ်တွေကို စနစ်တကျနဲ့ဘ၀တွေကို သတ်နေတာ ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတို့မြင်ကြပါသလား..အာဏာရှင်တိုင်းကို မျိုးဖြုတ်မယ့် ရဲရင့်ခြင်းနဲ့နူးညံ့ညင်သာခြင်း သဘောဆောင်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းနဲ့ကဒေါင်း တို့ ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကို ဖြိုဖျက်နေပြီဆိုတာ သတိထားမိပါသလား.... ခွပ်ဒေါင်းနဲ့ကဒေါင်းတို့ ရဲ့ပေါင်းစည်းမှု အဆုံးသတ်ဟာ အာဏာရှင်မှန်သမျှ ဒူးခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ထိပ်လန့် ကြောက်ရုံ့ပြိုကျခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းတွေကော သိမှသိကြပါသလား... ဆရာကြီး အဘ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက “အဆောက်အအုံကိုသာ ဖြိုဖျက်လို့ ရမယ်..မောင်တို့မယ်တို့ ရင်ထဲက ကိန်းအောင်းနေတဲ့ သမဂ္ဂစိတ်ဓါတ်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဖြိုဖျက်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ပြောကြားသွားခဲ့တယ်... ကျောင်းသားသမဂ္ဂ... ကျနော်တို့ယနေ့ ဆုံးရူံးနေမှုတွေကို ဒီကျောင်းသား သမဂ္ဂရှိမှသာလျှင် တောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်... ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အကျောင်းပြောရင်း ဖမ်းတယ် ဆီးတယ်... ကျနော်တို့ ကလည်း အလကားနေရင်း ရေမသောက်နဲ့နိုင်ငံရေးမှု..ဒါမလုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးမှု.. အချိန်ပြည့်ကြောက်နေရတယ်... ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာ သူပုန်အဆောက်အအုံ မဟုတ်ဘူး... တိုင်းပြည်ကြီး သူ့ ကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်အောင် စတင်ခဲ့တာ ဒီကျောင်းသားတွေက စတင်ခဲ့တာ... အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်ထုတ်ဖို့ အတွက် ဂျပန်မှာ စစ်ပညာသွားသင်ရန် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ဆန်း(နောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရတာ ကျနော်တို့ ရဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီးထဲမှာ ဆိုတာ ဦးသန်းရွှေ ကောင်းကောင်း သိပါသလား... မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးဖြစ်တည်ဖို့အစပြုခဲ့တာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂပါ...တိုင်းပြည်ရဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထက် ရာထူးပိုကြီးချင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဆိုတဲ့ ဦးသန်းရွှေ.. “တပ်မတော်အစ..ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ” ဆိုတာကော အသက်ကြီးလို့ မေ့သွားပြီလားလို့မေးချင်ပါတယ်... ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာ စာမေးပွဲ ဖြေရက်ဆို ပြောပြောနေတဲ့ စကားတခုရှိတယ်.. ဘာဖြစ်လဲကွာ..ကျောင်းသားတွေပဲ..ကျောင်းသားကဒ်ပါတယ်... ဘာမှမဖြစ်ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဟုတ်ပါတယ်...ဒီလို ဟုတ်အောင် သူငယ်ချင်းတို့ သတွေ ဘာများလုပ်ခဲ့ကြလို့ လဲ လို့ကျနော့်ကိုယ်ကို ကျနော်ရော အပါအ၀င် ..ယနေ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို မေးကြည့်ချင်ပါတယ်... အဲဒီလို ဟုတ်နေတာ တချိန်က ငါတို့ ရဲ့နောင်တော် ကျောင်းသားကြီးတွေ အသက်နဲ့လဲလို့ ရတဲ့ သူတို့ ရဲ့အသီးအပွင့်တွေကို ငါတို့ က စားသုံးနေကြရတယ် ဆိုတာ သိထားဖို့ နဲ့နောက်နောင် ငါတို့ ရဲ့ညီတော် တွေ အလည့် ငါတို့ မှ မျိုးစေ့တွေမချခဲ့ ရင် ငါတို့ ရဲ့ညီတော်တွေ အလှည့်မှာ ကျောင်းသားဆိုတာ ခိုင်းတိုင်း လုပ်တဲ့.. ခြောက်တိုင်း ကြောက်တဲ့ သတ္တ၀ါမျိုးလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့... ပြောရင်း ကြည့်ရူသူအားလုံးပဲ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ... တပ်မတော် အစ ကျောင်းသား သမဂ္ဂဆိုတာ ဗိုလ်သန်းရွှေဆီ လူကြုံပါးလိုက်ကြပါ...
Posted by သင့်ကင်း at 5:07 AM0comments
Posted by သင့်ကင်း at 6:01 AM0comments
ငါတို့ က လူကို မတိုက်ဘူး..မူကို တိုက်တာ...အင်း.. ဒီစကားဟာ တော်တော်များများသုံးလာကြတယ်... ကျနော် တွေးမိသလောက်တော့ တော်လှန်ရေး တခုမှာ ဒါဟာ လိုအပ်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူး... နိုင်ငံတကာက တော်လှန်ရေးတွေ ကြည့်ရင်လည်း ဘယ်သူမှ ဒီလိုအော်ခဲ့ကြလိမ့်မယ် မထင်မိဘူး... လူ နှင့် မူ.. ကျနော်တို့ လည်း ကြားသိနေကြပါတယ်... ဒီမိုကရေစီ နဲ့အာဏာရှင် စနစ်.. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဖြစ်နေကြတယ်... ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများက ပြောလိုက်တိုင်း မူတွေ အကြောင်း... စစ်အုပ်စု ဘက်ကလည်း ပြောလိုက်တိုင်း လူ အကြောင်း...ဥပမာ ဆိုပါစို့ ..ဒီမိုအင်အားစုများက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတဲ့.. အဲ..စစ်အုပ်စု ဘက်ကလည်း ပြောတယ်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်..ဟို ကွန်မြူနစ် ကြီးတွေ ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့.. ဆိုတော့.. စစ်အုပ်စု ဘက်ကလည်း မူတွေကို ရှောင်နေတယ်...ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ဦးစားပေး ပြဿနာလုပ်တယ်.. အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ သူတို့ ရဲ့ မီဒီယာများရဲ့အယုံသွင်းမှုကို ခံစားကြရပါလိမ့်မယ်... အခုတော့ လိုရင်းမရောက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်... အခုဆိုရင် သိပ်ကြောက်စရာကောင်းလာပြီ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဦးစားပေးတိုက်တယ်.. နောက်အမျိုးသားညီလာခံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါရင် တတ်ခွင့်မပေးဘူး ဆိုတဲ့မီဒီယာ လက်နက်သုံးလာတယ်... အဲဒီမှာပဲ.. ရူးကြောင်ကြောင် တချို့ က ပြည်သူကောင်းစားရေး အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါလည်း လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ၀င်လာတယ်.. စစ်အုပ်စုရဲ့လူစုကွဲအောင် ခွဲနေတာကို မမြင်ဘူး... ဒီတော့ ပြည်ပရောက်နေသူတွေမှာ နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတ လေ့လာခွင့်ရနိုင်ပေမယ့်လို့ပြည်တွင်းက လူငယ်တော်တော်များများမှာ မလေ့လာနိုင်ကြဘူး လေ့လာခွင့်မရကြဘူး... ဒီလို ဖြစ်လာလေလေ နိုင်ငံရေး အသိပညာတွေ နည်းလေလေ ..စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့် မှုတွေ ပိုမိုအောင်မြင်လေလေ ဖြစ်လာပါမယ်... စစ်အုပ်စု ဘက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ကြီး အဖြစ်မြင်နေပါတယ်.. ဒီတော့ သူတို့ဒီလိုမြင်လေလေ ..အန္တရာယ်ကို ပိုမိုချေမှုန်းလေလေ ဖြစ်လာတိုင်း ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေ နစ်နာပါတယ်..သမိုင်းရှည်လာပါ့မယ်... ဒီတော့ မူတွေ လူတွေ အပါ့ထားပြီး..“ လူမှားရင် လူကိုဆော်...မူမှားရင် မူကိုဆော် ”ကြရင်တော့ဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လွတ်လပ်မှုတွေ ရရှိလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်..
Posted by သင့်ကင်း at 4:28 AM0comments
Posted by သင့်ကင်း at 4:04 AM0comments
MyanmarTeashop apologizes you for the service interruption which is due to the server’s physical failure. We have found out that the server was over heated because of the inadequate cooling system. In the previous server, we used water cooling system to keep our server cool. However, due to the lack of time, we were not able to plan for the cooling system like the previous one when we submitted the server to the authority.
We have tried our best to inform our members about it but we were unable to do that because of the encryption of all our members’ email address. Our hard disks have also suffered from physical damage. Fortunately, the backup system was able to backup all the data, and if we can write the code properly to describe the data again, we will get all our data back.
We now have done with the server setup, and we currently are working on the security codes to protect our members’ data. We will be back online as soon as we finish with the security coding system.
Please be ready to share your thoughts and to read others’.
Posted by သင့်ကင်း at 4:24 AM 1 comments
Posted by သင့်ကင်း at 6:33 AM0comments
အခုမှပဲ ဘလော့ဖြစ်တော့တယ်... စီဘောက်ဆိုတာက ကော ဘယ်လိုလုပ်ရအုံးမှာလဲ.... ဒါလုပ်တာတောင် ၄ နာရီလောက် အချိန်ပေးနေရရင် ဘယ်လွယ်မလဲဟ... ပြောပြကြအုံးလေ...
Posted by သင့်ကင်း at 6:43 AM2comments